पेट्रोलियम पदार्थ सर्टेज भएपछि सरकारले तोक्यो कोटा, कस्तो सवारी साधनलाई कति ! (कोटा सहित)
असोज ०५, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ, नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा केही असहज अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सवारीसाधनलाई तोकिएको कोटा मात्र इन्धन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
निगमले नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशन र वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनलाई आज पत्राचार गर्दै तोकिएको कोटाअनुसारको इन्धन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो । निगमका अनुसार मोटरसाइकल र स्कुटरलाई बढीमा पाँच लिटर पेट्रोल उपलब्ध हुनेछ । हलुका सवारीसधान, कार र भ्यानलगायतलाई बढीमा १५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइने निगमले जनाएको छ ।
निगमले डिजेलबाट सञ्चालन हुने मध्यम तथा छोटो दूरीका सवारीसाधनलाई बढीमा ५० लिटर र लामो दूरीको सवारीसाधनलाई बढीमा १०० लिटरसम्म उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । एम्बुलेन्स, विद्यालयका बस तथा सरकारी सवारीसाधनलगायत अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी इन्धन बिक्री वितरण गर्न एशोसिएशनलाई अनुरोध गरिएको निगमका प्रवक्ता इञ्जिनीयर वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो ।
ट्याङ्कर चालकले विभिन्न माग राखी इन्धन ढुवानी नगर्दा मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको छ । तीन दिनदेखि इन्धनको ढुवानी ठप्प छ । आज पनि काठमाडौँका अधिकांश पेट्रोल पम्प बन्द छन् । इन्धन भर्नका लागि पेट्रोलपम्पमा लामो लाइन लागेको छ । इन्धनको अभाव हुँदा उपत्यकाका सडकमा तुलानात्मकरुपमा केही कम सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज ०५, २०७५१५:२१
निर्मलालाई न्याय दिन माग गर्दै आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन
डोनाल्ड ट्रम्प र अमेरिकी ‘सफ्ट पावर’को गिरावट
तीनदिनदेखि पुरिएको बस अझै निकालिएन !
मिटरमा जान नमान्ने र जथाभावी भाडा असुल्ने ६१ ट्याक्सी चालकमाथि कारवाही
५० प्रतिशत महिला अझै घरमै बच्चा जन्माउँछन्
वन्यजन्तुको स्वास्थ्यसम्बन्धी घोषणापत्र जारी
यसपाली पनि डिभी खुल्दै ! कहिले खुल्दैछ २०२०को लागि डिभीको आवेदन ? हेर्नुहोस् !